सामग्री पुन: प्रयोग गर्नुहोस्
TSG स्वीकृत स्थापनाकर्ताहरू
रूफटप विज्ञापन साइलेन्ट रूफ सिस्टमहरूको रंगीन संस्करणहरू
के भइरहेको छ अपडेटका लागि हाम्रो ब्लगको भ्रमण गर्नुहोस्
नाटकीय रूपमा कुनै धातु वा अन्य हार्ड सतह छाना संरचनामा वर्षा शोर कम गर्दछ
के वर्षा आवाज तपाईंको लागि समस्या हो?
हामीसँग समाधान छ, पढ्नुहोस्
आँधी युनिसको समयमा O2 एरेना क्षति भयो। स्थलको कपडाको छानाका भागहरू, पहिले मिलेनियम डोम भनेर चिनिन्थ्यो, 18 फेब्रुअरी 2022 मा आँधीको हावाको बलले टुक्रा-टुक्रा पारिएको थियो।
एउटा प्रश्न जुन साइलेन्ट रूफ लिमिटेडलाई नियममा सोधिन्छr आधार हो
"तूफानी मौसममा साइलेन्ट रूफ स्थापना कत्तिको सुरक्षित छ?" माथिको तस्बिर युनिस तूफान यूके मार्फत गएको केही समय पछि लिइएको भर्खरको साइलेन्ट रूफ स्थापनाको हो। स्थापना तत्वहरूको सम्पर्कमा रहेको भवनको 10 औं तलामा छ। हामी रिपोर्ट गर्न पाउँदा खुसी छौं, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, न त यो वा हाम्रा अन्य कुनै पनि पूर्ण स्थापनाहरूलाई आँधी युनिस वा 2021-22 को हालैको कुनै पनि आँधीको कारणले कुनै क्षति भएको छैन।
हाम्रो फेसबुक पृष्ठ यहाँ जाँच गर्नुहोस्
यस भिडियो क्लिपले हाम्रा नियुक्त स्थापनाकर्ताहरूलाई टिभी र स्टुडियो समूह देखाउँदछ, एक साइलेन्ट रूफ स्थापनाको समाप्त सतहमा स्टिन्सिल गरिएको लोगो लागू गर्दै। लन्डन फिल्म स्टुडियो.
भवनको १० औं तल्लामा मौन छत स्थापना भइरहेको देखाउँदै केही छविहरू। सामान्य अवस्था भन्दा अलि फरक।
हामी मौन रूफमा हाम्रो साइलेन्ट रूफ सामग्रीको एक्लो वर्ल्ड वाइड आपूर्तिकर्ता हो जुन छाना सतहहरुबाट वर्षा हुने नाउलाई नाटकीय तरिकाले कम गर्दछ। हामी बेलायतको दक्षिण तटमा आधारित छौं, हाम्रो दर्ता गरिएको कार्यालय टोरक्वे, डेभन, युकेमा छ। हामीले युकेभर भरिका स्थापनाहरूहरू केही सीमितताको अधीनमा राख्यौं र विश्वव्यापी रूपमा स्थापनाकर्ताहरूलाई हाम्रो अनुपम सामग्री आपूर्ति गर्छौं। तपाईंको प्रोजेक्टको बारेमा हामीसँग कुरा गर्न रुचि छ? निर्यातमा रुचि छ? यस पृष्ठ पछाडि तल हेर्नुहोस्, वा हामीलाई कल दिनुहोस्।
टेलिफोन: ०१01803० 203445 २०077865 Mobile मोबाइल: ०76659 XNUMX XNUMX XNUMX
धातुको छानामा वर्षा आवाज कसरी रोक्न सकिन्छ।
साइलेन्ट रूफमा हामीले वर्षाको आवाजको समस्याको समाधान विकास गरेका छौँ जुन कडा छत सतहबाट बसीरहेको छ वा तल काम गर्ने ठाउँमा। हामी सतहमा हाम्रो वर्षा शोर घटाउने टेक्नोलोजी सामग्री प्रयोग गर्दछौं जस्तै प्रोफाइल मेटल शीटिंग र त्यस्तै।
एक पटक उपचार गरिएको छत सतह मुनिको ठाउँ स्थापना गरेपछि तुरुन्तै वर्षा आवाज प्रदूषणमा नाटकीय कटौतीबाट फाइदा हुन्छ। यस साइटमा छविहरू एसआरएम कसरी सेप्टेम्बर 2018 मा, साउन्डल, लन्डनको हनी मोन्स्टर फ्याक्ट्रीमा हनी मोन्स्टर फ्याक्ट्रीमा एक विशाल प्रोफाइल मेटल रूफमा लागू गरिन्छ भन्नेको उदाहरण हो, यसको सबै 5400 वर्ग मीटर।
प्रोफाइल धातु छत
प्रोफाइल धातु छत प्यानल - नाटकीय रूपमा वर्षा शोर कम
यस्तो अवस्थामा जब धातु प्रोफाइल वा मिश्रित छत सामग्रीमा वर्षाको आवाजले कामको लागि खाली ठाउँलाई असर गरिरहेको छ मौन रूफमा कल गर्नुहोस्,
हामीसँग तपाईंको समस्याको समाधान छ। तीन आयामी म्याट्रिक्स इन्सुलेशन उत्पादनहरूको विश्व अग्रणी निर्माताको सहकार्यमा मौन रूफ प्रणाली, तपाईंको अवस्थित छतको शीर्षमा स्थापित नाटकीय रूपमा वर्षाको शोर कम हुनु अघि यो कम हुन्छ। यस प्रकारको छाना संरचनाहरूमा वर्षाको आवाज धेरै फरक वातावरणमा उपद्रव हो; औद्योगिक कारखाना इकाईहरू, स्कूलहरू, फिल्मांकन क्षेत्र, वाणिज्यिक कार्यालयहरू र त्यस्तै। यस साइटमा छविहरू एसआरएम कसरी लागू हुन्छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो, सेप्टेम्बर २०१ London मा लन्डनको साउन्डलमा हनी मोन्स्टर फ्याक्ट्री रूफमा विशाल प्रोफाइल मेटल रूफमा कसरी लागू हुन्छ। , सबै यसको 2018 5400०० वर्ग मिटर।
मौन रूफ स्थापना द्रुत रूपमा सम्पन्न हुन्छ र सबै स्थापना गतिविधि भवनको बाहिरी भागमा हुन्छ ताकि छतमुनि रहेका गतिविधिहरूमा हस्तक्षेप नगर।
हो, मौन रूफ छाना विज्ञापन र advertising्ग को एक दायरा मा उपलब्ध छ। कुनै पनि छत सतह मा आफ्नो कम्पनी लोगो छ। कुनै पेंटि, छैन, हटाउनुहोस् र कुनै पनि समयमा स्थानान्तरण गर्नुहोस्। यूभी स्थिर भयो।
२०१ In मा, हामी हाम्रो स्थापना कम्पनी मार्फत एक ग्लोबल ब्रान्ड द्वारा सम्पर्क गरिएको थियो जसले प्रश्न सोधे, 'अरू कुन रंगहरू उपलब्ध छन्?'
तर यो अनुसन्धान वर्षा आवाजको दमनको लागि नभई रूफटप विज्ञापन उद्देश्यको लागि हो। एक रंगको आधार तह कम्पनीहरू लोगोको विरोधाभासी रंगको साथ ओभरलाइड हुन्छ।
यो परियोजना १०,००० वर्ग मिटर छत संरचना को लागी धेरै उच्च वृद्धि भवनहरु द्वारा बेवास्ता गरिएको थियो, उत्तम विज्ञापन प्लेटफर्म।
जर्मनीमा हाम्रो निर्माणको अनुसंधान र विकास विभाग भित्रको महीनाको वार्तालाप र प्रयासहरू पछिको, एउटा नयाँ संस्करण जसलाई हामी संदर्भ गर्छौं,
रंगीन मौन रूफ सामग्री (CSRM), जन्म भएको थियो।
अब विज्ञापनको लागि तपाईंको रूफटप प्रयोग गर्नुहोस् र एकै समयमा कष्टप्रद वर्षाको आवाजलाई दबाउनुहोस् साइलेन्ट रूफको यो अनौंठो भिन्नतासँग।
प्रश्न: एक अर्को आवेदन कोष अर्को को लागी सक्छ?
स्थापना दृष्टिकोण छनौट र color्गको आधार तहबाट सुरु हुन्छ, कम्पनी लोगो CSRM को एक विशेष पातलो तहबाट काटिन्छ र बेस लेयरमा सुरक्षित हुन्छ। हाम्रो स्थापना कम्पनीले विश्वभर मा यो स्थापना सेवा प्रदान गर्न सक्छ। के तपाइँसँग नयाँ स्थितिबाट लाभान्वित हुने परिस्थिति छ? रूफटपको लागि, विज्ञापन अब हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् थप जानकारीको लागि।
यसले कसरी काम गर्दछ ... सुनुवाई भनेको विश्वास हो
म कसरी वर्षाको आवाजलाई रोक्न सक्दछु भन्ने सामान्य प्रश्न हो तपाइँ वर्षालाई रोक्न सक्नुहुन्न, तर मौन रूफले नाटकीय रूपमा वर्षाको आवाजलाई एक कानाफूसीमा कम गर्नेछ।
बाँया छोटो भिडियो क्लिपले धातुको सतहमा पानी झर्ने प्रभावको श्रव्य रूपमा प्रदर्शन गर्दछ।
यसले कठिन सतहमा साइलेन्ट रूफ सामग्रीको कभरिंगको फाइदाको साथ र बिना वर्षा आवाजलाई नक्कल गर्दछ। सम्झनु, प्ले बटन थिच्नु अघि तपाईंको उपकरणको भोल्युम अप गर्नुहोस्। यो ध्वनि ट्र्याक हो जुन भिडियोको लागि पनि रूचि हो।
फिल्म उद्योग - हाम्रो ब्लग भ्रमण गर्नुहोस्
के तपाईं फिल्म उद्योग संग संलग्न हुनुहुन्छ?
के वर्षा आवाज तपाईंको लागि समस्या हो? हामीसँग वर्षाको आवाज कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा समाधान छ।
दानव छत '
2018 को वसन्तमा, हामीले सोधपुछ प्राप्त गरेका छौं: -
"नमस्ते ... यो अनौंठो हुन सक्छ। मसँग एउटा ठूलो गोदाम छ जुन हामी वर्षाबाट प्रुफ आवाज चाहन्छौं र हामी आन्तरिक रूपमा केहि स्थापना गर्न सक्दैनौं किनकि सामान्य इन्सुलेशन विधिहरूले काम गर्दैन। के तपाईंको साइलेन्ट रूफ सामग्री बाहिरी रुपमै धातु गोदाम छानामा लगाउन सकिन्छ?
यो सोधपुछ फिल्म ईन्डस्ट्री भित्र ध्वनि रेकर्डि withको साथ सम्बन्धित पहिलो साइलेन्ट रूफ स्थापनामा विकसित भयो। यो प्रसारित भयो कि 'ठूलो गोदाम' एकेए राक्षस फिल्मांकनको लागि सेट राखिएको थियो। सन् १ 2019 2019 in मा स्काई एट्लान्टिक द्वारा जारी गरिएको यो श्रृंखला हो। मौन रूफले कठोर सतहको छत संरचनाबाट उत्पन्न वर्षा आवाजको समस्याको समाधान प्रदान गर्‍यो। वर्षाको आवाजले गोदाम छतमुनि रहेको सेटमा फिलिमिंग टोलीको रेकर्डि activities गतिविधिहरूमा प्रतिकूल असर पार्दछ। यो स्थापना यति सफल थियो कि अन्य सोधपूछहरू फिल्म फिल्मसँग फेरि सम्बन्धित भयो। २०१० को शुरुमा, स्ट्रीमवर्कको नयाँ सामस मेन्डिज उत्पादन '१ 1917 १XNUMX' ले साइलेन्ट रूफ लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउनको लागि, बेलायतको सालिस्बरी क्षेत्रमा फिल्मांकनका लागि वर्षा शोर घटाउने टेक्नोलोजीमा संलग्न गरेको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा मौन रूफ
संयुक्त राज्य अमेरिका मा आधारित मोफेट प्रोडक्शन्स र ह्युस्टन, टेक्सासको फिल्म स्टुडियोमा हाम्रो उत्पादन प्रयोग गर्नुभयो। हामी मोफेट प्रोडक्शन्सको अनुभवलाई चासोका साथ अनुगमन गर्नेछौं।
के तपाईसँग पनि त्यस्तै अवस्था छ? हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् - हामीसँग समाधान छ - अधिक वर्षा आवाज अवरोधहरू छैन।
टिभी स्टुडियो ग्रुप लिमिटेड अस्थायी संरचना, स्टुडियो फिट-आउट, ध्वनिक उपचार र घटना उत्पादन विश्वव्यापी मा विशेषज्ञहरू। टिभी र फिल्म स्टुडियो समूह ध्वनिमुखी स्थापना, ध्वनिक उपचार, स्टुडियो फिट-आउटहरू, अर्ध-स्थायी भवनहरू निर्माण गर्ने र अस्थायी संरचनाहरू जस्तै विशेषज्ञहरू हुन्; पप-अप स्टुडियोहरू, कार्यशालाहरू, सामाजिक रूपमा टाढाको भोजन कोठा र अन्य सहायक भवनहरू। तिनीहरूको अनुभव र व्यावसायिक प्रतिबद्धता बनाउँछ टिभी स्टुडियो समूह लि मौन रूफ सामग्री स्थापना गर्नका लागि उत्तम फिट र उनीहरूले सफलतापूर्वक एसआरएमलाई धेरै गोदामहरू, बार्नहरू, टिभी र फिल्म स्टुडियो छप्परहरूमा लागू गरेका छन् र एसआरएमको सिफारिश स्थापनाकर्ता हो।
साइलेन्ट रूफ सामग्रीको अघिल्लो स्थापनामा धेरै चलचित्र र टेलिभिजन निर्माणहरू; '१ 1917 १' 'साम Mendes चलचित्र, लिभेडेन स्टुडियोमा ब्याटम्यान, HS2 सुरक्षा भिडियो र अधिक धेरै, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ब्रैक्लेको HS2 प्रशिक्षण केन्द्रमा र लन्डन फिल्म स्टुडियोमा भर्खरको मौन छाना स्थापनाहरूको थप जानकारी हेर्न।
साइलेन्ट रूफ - मेकनाइज्ड स्थापना
हालसालै हामीले यांत्रिक स्थापना अपनाएका छौं
प्रक्रिया जहाँ फराकिलो स्प्यान वा उचाइमा काम गर्ने एक हो
मुद्दा दायाँ तर्फको छवि खलिलोको अस्थायी कभरिंग थियो
साम Mendes WW1 महाकाव्य '1917' को लागि फिल्मांकन को लागी प्रयोग गरीयो।
एउटा अद्वितीय सामग्री जुन सामान्य शब्दहरूमा माथिल्लो चिकनी सतहमा खस्ने वर्षाको थोप्लाहरू टुक्रा-टुक्रा पार्छ, पानीको पानी त्यसपछि जालीको भित्र पस्छ, त्यसपछि मूल छानाको सतहमा बग्छ र टाढा पानी पानी निकासी प्रणालीमा जान्छ।
मौन रूफ सामग्री यूभी स्थिर छ। सामग्रीको लचिलो गुणहरूको कारणले यसलाई कुनै पनि सतहमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यो सपाट वा घुमाइएको छ। हामीले विभिन्न सतहहरूमा सामग्री सुरक्षित गर्न विभिन्न माध्यमहरू विकास गरेका छौं।
वर्षा ध्वनि ध्वनि तरंगहरु को रूप मा हामीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। वर्षा वर्षाको समयमा छाना सतहमा वर्षा थोपाको असरसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका फ्रिक्वेन्सीहरू उत्पादन गरिन्छ। अवस्थित छत संरचनाले केही क्षमतामा ध्वनिप्रुफिंग सामग्रीको रूपमा काम गर्ने छ तर प्रश्नको छत निर्माण भएको बेला वर्षा आवाज आवाज नियन्त्रण प्राथमिक प्राथमिकता थिएन। जब वर्षाको आवाजको बिरूद्ध छतलाई ध्वनिप्रुफ गर्न कोशिस गर्नु पर्दछ, पहिलो विचारमा छानाको संरचनाबाट उत्पन्न हुने ध्वनि (वर्षा आवाज) को आवृत्तिको दायरासँग लड्न ध्वनिक सामग्री थप्नु हो। कुनै संरचना कुनै निश्चित फ्रिक्वेन्सीहरूमा कम्पन हुन्छ, छत प्यानलहरू ती धातु वा कम्पोजिटले ड्रम छाला जस्तो व्यवहार गर्दछन् र जब प्रभाव पार्छ ध्वनि उत्पन्न हुन्छ। के यो ध्वनी समस्या टाउको मा टाउल डिजाइन गरिएको छ कि ध्वनिक उपचार सामग्री परिचय गर्न यो तार्किक छैन।
परम्परागत दृष्टिकोण छत मा ठूलो जोड्न हुनेछ। हामी सबैलाई सहजै थाहा छ कि बाक्लो छत वा भित्ताले हल्लाको ध्वनि (ध्वनि तरंगहरू) लाई रोक्न सक्छ। त्यसोभए वर्षाको झर्नाले उत्पन्न हुने आवाजको स्तरलाई कम गर्न छानालाई मोटा बनाउनुहोस्, के यो स्पष्ट उत्तर होईन? साउन्डप्रूफिंगको सब भन्दा प्रसिद्ध कानून मास कानून हो। यसले भन्छ कि ध्वनिक अवरोधको वजन दोब्बर गरेर तपाईंले ध्वनि मापनमा लगभग ddB सुधार प्राप्त गर्नुहुनेछ। अर्को शब्दहरुमा, यदि तपाईले इट्टाको पर्खालको आकार दोगुना गर्नुभयो, उदाहरणका लागि तपाईले साउन्डप्रूफिंगमा करीव -०-6०% सुधार प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यस्तै छतको साथ, तर अब हामीले हामीले अगाडि बढाउँदै गरेको अतिरिक्त लोडिंगबारे विचार गर्नुपर्दछ, छतले यो अतिरिक्त लोडिंगलाई कसरी सहयोग गर्न सक्दछ र कुन लागतमा र कुन प्रयासमा?
वा के हामी यस समस्यामा हेर्दै छौं विभिन्न सर्फेक्टिभबाट?
छतमा जन थप्ने वर्षाको आवाजको समस्यालाई ध्यानमा राखीरहेको छ यो भएपछि। एक वैकल्पिक समाधान के यो वर्षा हुनु अघि वर्षाको रोक्न हो? मौन रूफ मटेरियल (एसआरएम) ठ्याक्कै गर्दछ जुन छतको OUTSIDE मा अवस्थित छत सतहको शीर्षमा खसेको वर्षा रोक्दै छ। यसको अतिरिक्त, SRM प्रति वर्ग मीटर square०० ग्राम मात्र तौल, कुनै छाना संरचना यस न्यूनतम थप समर्थन गर्न सक्षम हुनु पर्छ। त्यसोभए मास थप्नुको सट्टा साइलेन्ट रूफ कसरी काम गरिरहेको छ?
साइलेन्ट रूफ मटेरियल (एसआरएम) एक अनौंठो उत्पादन हो जुन सामान्य शब्दहरुमा चुपचाप वर्षा हुने वर्षाका टुक्राहरू यसको माथिल्लो चिकनी सतहमा छत सतहमा उत्पादित प्रभाव आवाजलाई स्थानन्तरित नगरी चकनाचूर पार्छ। वर्षाको पानी त्यसपछि एसआरएमको लाटिसबाट हिर्काइन्छ त्यसपछि मूल छाना सतहमा चुपचाप ड्रिप्स हुन्छ र टाढा पानीको पानी निकासी प्रणालीमा जान्छ। साइलेन्ट रूफले कुनै छाना संरचनामा वर्षाको आवाजको ठूलो भागलाई केवल कानाफूसी गर्न बन्द गर्दछ। सामग्री रंग कालो छ र यूभी स्थिर छ। सामग्रीको लचिलो गुणहरूको कारणले यसलाई कुनै पनि सतहमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यो सपाट वा घुमाइएको छ। हामीले विभिन्न सतहहरूमा सामग्री सुरक्षित गर्न विभिन्न माध्यमहरू विकास गरेका छौं।
एक प्राविधिक विवरण
'साइलेन्ट रूफ सामग्री एक लचिलो, बहु-आयामी सामग्री हो, पोलीमाइड फिलामेन्टबाट बन्डे हुन्छ जहाँ उनीहरू एक अर्को कडा, खुला जाली बनाउँछन्। यो अनियमित, द्वि-आयामी संरचनामा फिलामेन्टबाट उत्पादित एक तर्फ फिट पछाडि छ जुन औष्णिक रूपमा बहु-आयामिक संरचनासँग सम्बन्धित छ।
प्रोफाइल मेटल रूफिंग संरचनाहरू कालो साइलेन्ट रूफ सामग्रीको निरन्तर लम्बाइको साथ पूर्ण रूपमा कभर हुन्छन्, प्रत्येक लम्बाई छिमेकीमा सुरक्षित हुन्छ र हातेमा लंगर गरिन्छ। सामग्रीको खुला जाली संरचनाको कारणले यसले एकदम थोरै हावा प्रतिरोध प्रस्तुत गर्दछ त्यसैले मौसमको मौसमले असर गर्न सक्दैन।
पुन: प्रयोग - एक अद्वितीय सम्पत्ति
मौन रूफ पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ। यो पुन: प्रयोग मौन रूफ सामग्री (SRM) को एक अद्वितीय सम्पत्ति हो। जब तपाईं कुनै पनि रकमको एसआरएम खरीद गर्नुहुन्छ, तपाईं ज्ञानमा त्यसो गर्नुहुन्छ कि यो फरक छाना संरचनामा पुन: स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ र जब तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ। यो वास्तवमा अरू सबै उपचारहरूको लागि होईन जुन छानाको संरचनाहरूमा वर्षाको आवाजको प्रभावलाई कम गर्न प्रयोग गरिएको थियो।
सामान्य दृष्टिकोण भनेको ध्वनि प्रदूषणको स्तर लाई कम गर्न को लागी प्रयास गर्नु हो जुन यो छविको संरचना को मुनि को लागी ध्वनिक ध्वनि घटाउने स्प्रे लेयर (हरु) लाई जोडेर भयो।
मौन रूफ सामग्री छत संरचना को बाहिरी सतह मा लागू, छ वर्षा सतह मा असर वर्षा वर्षा रोक्छ नाटकीय रूपमा परिणाम वर्षा वर्षा को आवाज को कम यो पहिले यो घट्छ।
तपाईंसँग त्यसपछि एसआरएम रोल अप गर्न विकल्प छ, यसलाई अर्को स्थानमा ढुवानी गर्नुहोस् र यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् र यो वर्षाको आवाज घटाउने गुणहरू फेरि, र फेरि, र फेरि ... एक खरीद, बहु अनुप्रयोगहरू।
वर्षा ध्वनि प्रदूषणको सम्बन्धमा कुन अन्य उत्पादनसँग पुनः प्रयोगको यो सम्पत्ति छ? हाम्रो ज्ञानको लागि, होईन।
दायाँपट्टिको तस्विर त्यो हो जहाँ साइलेन्ट रूफ मटेरियल साउथलको मोन्स्टर रुफबाट पुन: फेला पारिएको थियो र यसलाई वेम्बलीको पुरानो इग्निशन बिल्डिंगमा पुनः फिट गरिएको थियो, दायाँको तस्विर साइलेन्ट रूफ मटेरियल पहिले र पछिको हो। पुरानो इग्निशन भवनमा फिट।
यो सबै6दिनमा शुरू देखि समाप्त गर्न मा गरिएको थियो।
हामी इ England्ल्यान्डको दक्षिण तटमा आधारित छौं, तथापि तपाईंले बेलायतबाहिरको कुनै अन्य स्थानमा दिमागमा परियोजना राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग यस्तो स्थिति छ कि त्यहाँ छानाको संरचनाबाट वर्षाको आवाजले कार्य स्थान वा तल बस्ने क्षेत्रलाई असर गरिरहेको छ भने, हामी हाम्रो साइलेन्ट रूफ सामग्री तपाईंको स्थानमा निर्यात गर्न व्यवस्था गर्न सक्दछौं जहाँ यो विश्व व्यापी हुन सक्छ।
साइलेन्ट रूफ सामग्रीको स्थापना सरलताको लागि हो र यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने हाम्रो अनलाईन वा टेलिफोन समर्थनको माध्यमबाट हरेक चरणमा निर्देशन दिनुहुनेछ।
साइलेन्ट रूफ मटेरियल (एसआरएम) गाँठोमा १ मिटर चौडाई र अधिकतम meters० मिटर लम्बाइमा पुर्‍याइन्छ। SRM को एक वर्ग मिटर 1g छ र यो 60mm मोटाई छ। बेलसहरू तपाईको परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि लम्बाइमा प्रि-कट डेलिभर गर्न सकिन्छ यो फ्लैट, पिच गरिएको, ब्यारेल प्रोफाइल छत क्षेत्र हो।
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस अब मूल्य निर्धारण र वितरण जानकारी को लागी।
टेलिफोन: 01803 203445
केवल हामीसँग केही कम्पनीहरू छन् वा हाल हामी काम गरिरहेका छौं
एसआर सामग्री को वजन के हो
मौन रूफ स्थापनाको वजन कति छ? साइलेन्ट रूफ सामग्रीको वजन प्रति वर्ग मीटर meter०० ग्राम मात्र हो। यो अवशोषित छैन त्यसैले वर्षाको पानी राख्ने छैन दिईएको छाना संरचनामा लोड गर्न थप्न।
'U' र 'R' मानहरू के हुन्
हाम्रो साइलेन्ट रूफ सामग्रीको सम्बन्धमा, सामग्रीको 'यू' र 'आर' महत्वहीन हुन्छ जब यो विशिष्ट प्रयोगलाई ध्यान दिँदै छ जुन वर्षाले सिर्जना गरेको आवाजलाई छत सतहमा प्रभाव पार्ने प्रभावलाई कम गर्दछ। साइलेन्ट रूफ सामग्री थर्मल इन्सुलेशन उत्पादनको रूपमा डिजाइन गरिएको छैन।
U- कारक र U-value प्रश्नको विषयवस्तुको भित्री र बाहिरी वायु तापमान बीचको भिन्नताका कारण सामग्री मार्फत तातो फाइदा वा नोक्सानको मापनलाई विनिमय गर्न सकिने शब्दहरू हुन्। U-factor वा U-value पनि तातो स्थानान्तरणको समग्र गुणांकको रूपमा बुझिन्छ। कम यू-मानले बेहतर इन्सुलेट गुणहरू दर्साउँछ। एकाईहरू Btu / (hr) (ft2) (° F) हो। मौन रूफ सामग्री इन्सुलेटर हुनको लागि डिजाइन गरिएको थिएन त्यसैले सामग्रीको 'यू' मान गणना गरिएको छैन।
उत्पाद जानकारी / चश्मा पाना
पीडीएफ प्रतिलिपिका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
स्थापना गर्न कति समय लाग्छ?
साइलेन्ट रूफ स्थापना गर्न कति समय लाग्छ? प्रोफाइल मेटल रूफिंग (पीएमआर) संरचनाहरू र त्यस्तै स्थापितमा, साइलेन्ट रूफ मटेरियल (एसआरएम) केवल छतको पार गहिरो देखि इभ अप र छानाको पछाडि घुमाइन्छ। प्रत्येक 'स्ट्रिप' १ मिटर चौडा हुनेछ। अर्को पट्टी उल्टो तल पहिलो स्ट्रिप मा राखिएको छ र 'सिलाई' सँगै पीवीसी केबल सम्बन्ध प्रयोग गरेर। यस पट्टी पछाडि पछाडि पछाडि रहेको छ यो छिमेकी संग मिल्छ र प्रक्रिया दोहोरिन्छ। यस विधि प्रयोग गरेर छतको पर्याप्त क्षेत्रलाई SRM द्वारा कवर गर्न सकिन्छ अपेक्षाकृत छोटो अवधिमा सामान्यतया hour० वर्ग मिटर प्रति घण्टा दुई फिटरको टोलीको साथ विशिष्ट हुन्छ।
मौन रूफ वितरण समय
हाम्रो यूके आधारमा उत्पादन प्लान्टबाट मौन रूफ वितरण समय3र6हप्ताको बीचमा लिन्छ तपाइँको पुष्टि गरिएको अर्डर प्राप्त गरिसकेपछि हालको काम लोडमा निर्भर रहन्छ।
मौन रूफको अपेक्षित जीवनकाल
हामीसँग स्थापनाहरू छन् जुन अहिले १० बर्ष पुरानो छ र गिरावटको कुनै स show्केत देखाउँदैन। दीर्घायु आवधिक सफा गर्न मट्रिक मैट्रिक्सबाट मलबे हटाउन सिफारिस गरिएको छ।
एक स्थापना गाईड
तपाईं यहाँ साइलेन्ट रूफ ध्वनिक रिपोर्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ
(c) सबै अधिकार सुरक्षित २०० 2007 - २०२० साइलेन्ट रूफ लिमिटेड
द्वारा संचालित EMF अनलाइन फारम
सदस्यता लिनुभएकोमा धन्यवाद। पुरस्कार प्राप्त गर्नका लागि अंक प्राप्त गर्न तपाईंको अद्वितीय रेफरल लिंक साझेदारी गर्नुहोस्।
लोड गर्दै ..